'Nama na uggure jaalalaanan kuffiise' - BBC News Afaan Oromoo
'Nama na uggure jaalalaanan kuffiise'
Kilooy Ayiliingi dubartii ganna 20 Kibba Landanirraati
Shamarreen hojii modeliingiin beekamtu Kilooy Ayiliing bara darbe Xaaliyaan keessatti guyyoota jahaaf ugguramtee turte. Erga jalaa miliqxee namoonni UK baay'een haala akkamiin jalaa baate kan jedhuuf shakkii qabu ture.
Guyyoota lamaaf erga harkaafi miila hidhamtee turtee nama ishee uggure waliin wal qunnamtii gochuuf walii galte.
Yerooo baay'ee waliin odeessuu jalqabnu hariiroo gaariin lamaan keenya gidduutti akka uumamaa deemu hubadheen faayidaa mataakoof jecha tooftaa kana itti fufeen fayyadame jette.
Shamarreen kun hojiii suuraaf jecha nama Luukaaz Heerbaa jedhamuun gara Xaaliyaan magaalaa Miilan deemtee ture.
Haa tahu malee akkuma achi waliin geesseen qoricha Keetaamayin jedhamu lilmoon waraanuun ukkamsanii Shaanxaa guddaa keessa galchuun konkolaataa keessa kaa'uun KM 190 gara baadiyaa naannoo lafa qonnaa tokkotti geessan.
Ayiliing haalichi baay'ee kan nama sodaachisu ture jette. Yommuun mana Herbaa gahus, yoo Yuuroo kuma 300 hin kennitu tahe wal qunnamtii saalaaf dabarfamtee gurguramta jedhee natti hime jette.
''Waan inni jedhu hundinuu dhugaa akka tahe secendiidhaafiyyuu hin shakkine sababnisaas deebiin ani kennuuf gadi fageenyaan ilaalaa waan tureef'' jette.
Garuu gidduutti akka ishee dhungachuu danda'uu fi hariiroo jaalalaa waliin jalqabuu danda'an ishee gaafate.
Isheenis yeroo kana dhageessu carraa ittiin miliquu dandeessu kana qofa tahuu hubatte.
Yeroo deebii kennuufiis fuulasaa irraa maaltu uumamuu akka danda'un ilaale jette. Innis deebii kenniteefiitti hedduu gammadee irra deddeebiin waa'eesaa qofa haasa'aa ture. Ayiliingis waan inni barbaade kana guutuun akka itti fufuu qabdu murteessite.
Herbaan qorannoo miilaanitti gaggefameen booda hidhameera.
Herbaanis akka ishee gadhiisuuf gatiin furii kaffalamuuf akka hin jirre yommuu mirkaneeffatu ishee gadhiisuun gara Qonsila Biriiteen Miilaan jiruu ishee geesse. Yeroo hamma waajirichi banamutti eegaa turan kaaffee tokko keessa taa'anii akka kolfaa fi taphataa turan namootni tokko tokko arguusaanii himaniiru.
Ayiliingis haalichi waan addaa fakkaachuu danda'a garuu maaliif nama si waliin hariiroo jaalalaa keessa galee si gadhiisuuf murteesserratti waan hamaa yaadde? kan jedhuuf ,
''akka inni jaalalakoon kufu gochuuf waanan danda'e hundaa gochuun dirqama'' jette.
Herbaan lammii Poolaandi yoo tahu qorannoo mana murtii miilaanitti gaggeefameen yakka raawwateef waggaa 16 fi ji'a sagaliin adabameera.
Ragaa ittisaa yeroo dhiyeeffataa tures kanaan dura isheen jaalalleesaa akka turtee fi ukkaamsaa kanas kan raawwate ishee miidhuuf osoo hin taane waa'eenshee odeeffamee beekamtii uummata bal'aa akka argattu gochuuf akka tahe himeera.
"Ani ammayyuu kaayyoonsaa maal akka tahe hin hubanne'' jette Ayiliing. Maalaqaaf qofa jecha waan na bute natti hin fakkatu, waggaa lama dura fuula feesbuukii isaa irratti na dabaleera, kunis akka yeroo dheeraaf na hordofaa ture agarsiisa'' jette.
yeroo gara UKtti deebitu balbala manasheetti ibsa miidiyaaleef yommuu kennaa turte fuulasheerraa gammachuu guddaan mul'ataa turee fi haalli uffatashee xiqqoo adda tahes nama ugguramee gadhiifame ishee hin fakkkeessu ture.
Innisheen sodaatte osoo irratti hin raawwatiin gara manasheetti galuusheef hedduu akka gammadde himtee akkuma xiyyararraa buutetti taheeti malee ogeessota miidiyaa uffattee eegaa akka hin turres hubachiisteetti.
"Ani anuma, kanan gara ripoorterootatti deemes waan barbaadan narraa fudhatani akka deemanifi. Garuu innis akkan ani yaadetti hin fudhatamne jette. Kunis erga ceephoo irratti kaaseeti.
Ayiliingi ugguramuun shaanxaa keessa kaa'amuun fudhatamte
"Namootni baay'een akkan guyyaa guutuu boo'uu fi miidiyaattillee hin dhiyaanne barbaadu. Garuu ani ibsa kennuun filadhe sababnisaas miidhama koo irraa kan na fayyisuu danda'u yaadakoo fi waan narra gahe yoon namatti himadhedha jedhee waanan yaadeef jette.
''Amma miira yeroo sana narratti mul'ate deebisee fidee namatti himuu osoo hin taane, dhugaa isaa dubbattee birmadummaa kee deebisachuu qabda jedheen yaada,'' jette Ayiliing.
Miidiyaaleen akka ani yaadee dubbadhetti gabaasuu dhiisuunsaanii akka namootni baay'een keessumaa dubartootni na ceepha'an taasiseera. keessumaa dhimmi mormisiisaan yommuu uumamu gadi fagesssanii qotuun ittuma akka namni baay'een si jibbu taasisu jechuun yaadashee kennite.
Erga Herbaan adabamee illee dhugicha amananii fudhachuu hin dandeenye jette.
Dubartootni heddunis akkan ani waan hamaa isa irratti hojjedheetti na arrabsaa turan jette.
Shamarran dhibbaan lakka'aman mana barumsaatii butamanii turan gadhiifaman